နှလုံးရောဂါသမားများအတွက် သွားကျန်းမာရေး - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » နှလုံးရောဂါ » နှလုံးရောဂါသမားများအတွက် သွားကျန်းမာရေး
ရေးသားသူ Dr. Phio Thia ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar.
သွားနဲ့ ခံတွင်း ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ အထူး ကာကွယ်မှု ပြုဖို့ လိုအပ်တဲ့ နှလုံးရောဂါ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ သွားနဲ့ ခံတွင်း ပြဿနာတွေကို ကုသဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ဟာ သူ့မှာ နှလုံး အမောဖောက်တာ၊ သွေးတိုးတာ၊ ရင်ဘတ်အောင့်တာ၊ လေဖြတ်တာ၊ မွေးရာပါ နှလုံး အားနည်းတဲ့ ရောဂါတွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သမားတော်နဲ့ရော သွားဆရာဝန်နဲ့ပါ သေသေချာချာ တိုင်ပင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို နှလုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါ ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ သွားနဲ့ ခံတွင်း သန့်ရှင်းမှုကို သေချာ ဂရုစိုက်ပြီး သွားဆရာဝန်ဆီ မှန်မှန်သွားခြင်းဟာ အရေးကြီးတဲ့ ကာကွယ်မှုတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးဝင်နှလုံးရောင်ရမ်းခြင်းက အဖြစ်နည်းတယ်ဆိုပေမယ့် ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း သေဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နှလုံးအတွင်းကို ဘက်တီးရီးယား ဒါမှမဟုတ် တခြား ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ ဝင်ရောက်သွားလို့ ဖြစ်တာပါ။ အဲဒီ ဘက်တီးရီးယား ရောဂါပိုးတွေ ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ အဓိကလမ်းကြောင်းဟာ ပါးစပ် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့အတွက်၊ ပိုးဝင်နှလုံးရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ဖူးတဲ့ လူနာ၊ နှလုံးအဆို့ရှင် အစားထိုးထည့်ထားတဲ့ လူနာတွေ၊ နှလုံး အဆို့ရှင် ရောဂါ၊ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါတွေကြောင့် နှလုံးအစားထိုး ကုသထားရတဲ့ လူနာတွေအနေနဲ့ သွားနဲ့ ခံတွင်းဆိုင်ရာ ကုသမှု မလုပ်ခင်တွေမှာ ပဋိဇီဝဆေးတွေကို ကြိုသောက်ခိုင်းဖို့ လိုပါတယ်။
အာခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အရသာခံတဲ့ အာရုံ ယိုယွင်းပျက်စီးသွားခြင်းတို့က သွေးကျဆေးတွေ သောက်ရင်း ဖြစ်တတ်တဲ့ အခြေအနေတွေပါ။ တခြားဆေးတွေကလည်း လူနာတွေ သွားနှုတ်တဲ့ ထိုင်ခုံမှာ လှဲနေရာကနေ ထထိုင်လိုက်တဲ့အခါ မူးလဲသွားတာမျိုး ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Calcium Channel Blocker လို့ခေါ်တဲ့ သွေးကျဆေးအမျိုးအစားတွေက သွားဖုံးသားတွေ ထူလာခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အဲ့ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ဆေးစသောက်ပြီး တစ်လလောက်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာတော့ သွားဖုံးတွေ ထူလာတာကြောင့် ဝါးရခက်လာတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ ထူလာတဲ့ သွားဖုံးကို ခွဲဖို့ လိုလာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုလူနာတွေအတွက် ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေး မှာကြားချက်တွေကို အသေးစိတ် လိုက်နာဖို့နဲ့ မကြာခဏ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နှလုံးအမောဖောက်တဲ့အခါ ရင်ဘတ်စအောင့်ပြီး မေးရိုးအောက်ပိုင်းထိ နာကျင်လာတယ်လို့ လူနာတွေက ပြောကြလေ့ ရှိပါတယ်။ သွားဆရာဝန် အများစုကတော့ နှလုံးအမောဖောက် လူနာတွေကို သွားနဲ့ ခံတွင်း ကုသမှုတွေလုပ်ဖို့ ၆ လအထိ စောင့်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ နှလုံးအားနည်းတဲ့ လူနာတွေဟာ သူတို့ကို နှလုံးအထူးကုတွေ သောက်ခိုင်းထားတဲ့ ဆေးအတိအကျစာရင်းကို သွားဆရာဝန်ဆီ ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ သွေးကျဲဆေး သောက်နေရတဲ့ လူနာတွေဆိုရင် သွားနှုတ်တဲ့အခါ သွေးမတိတ်တော့တာမျိုး ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ယင်းဆေးကို ခဏရပ်ထားဖို့ လိုပါမယ်။
Calcium channel blockers လို့ခေါ်တဲ့ သွေးတိုးတဲ့အခါ သုံးရတဲ့ ဆေးတွေကို ရင်ဘတ်အောင်တဲ့အခါမှာလည်း သုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို သွားဖုံးထူတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်တဲ့ လူနာတွေဟာ အခြေအနေစိတ်ချရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာပဲ သွားနဲ့ ခံတွင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုတွေကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ အခြေအနေစိတ်မချရတဲ့ အချိန်မှာတော့ ရင်ဘတ်အောင့်တာကို အရင်ဆုံး ကုသသင့်ပါတယ်။
နှလုံးအားနည်းတဲ့ရောဂါအတွက် ပေးတဲ့ဆေးတွေက အာခြောက်တာ၊ လျှာအရသာပြောင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ နှလုံးအားနည်းတဲ့ ရောဂါလူနာတွေမှာ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မရှိဘူးဆိုရင် သွားနဲ့ ခံတွင်း ကုသမှုအတွက် ထူးထူးခြားခြား အကာအကွယ်တွေ လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ နှလုံးရောဂါမျိုး ရှိနေရင်တော့ ဆေးရုံမှာသာ ဒီလိုသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကုသမှုမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းက ဖော်ပြနေသော သင့်ကျန်းမာရေး အကြောင်း
သွားကိုထိခိုက်စေတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ အမူအကျင့် ၁၁ ခု
သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုခံယူပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာများ
ခံတွင်းကျန်းမာရေး ထိန်းသိမ်းနည်း ၈ မျိုး
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောကျတိုဘာ 11, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း အောကျတိုဘာ 11, 2017
Reference: Dental Care for People With Heart Disease. http://www.webmd.com/oral-health/dental-care-heart-disease#1-2. Assessed January 25, 2017.
Heart Disease and Dental Care. http://www.studiodentaire.com/articles/en/heart-disease-and-dental-care.php. Assessed January 25, 2017.
သင့် သွားဖုံးများအား သေချာ ဂရုစိုက်ပါ
ခံတွင်းကျန်းမာရေး အတွက် သိသင့်သော အချက် ၁၀ ချက်
သွားနှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် အရေးအကြီးဆုံး သွားပွတ်တံ